Aiza no ahitako lalana misy vatokely eo akaikiko? - Bisikileta Vatokely
Tena > Bisikileta Vatokely > Làlana vatokely akaikiko - vahaolana ho an'ny
Làlana vatokely akaikiko - vahaolana ho an'ny
Aiza no ahitako lalana misy vatokely eo akaikiko?
Taratasim-bolaLàlan-dalamby mankany ivelany
nyhitadytambajotraAKAIKYianao, mankanesa ao amin'ny TrailLink.com. Mikaroha fotsiny ny faritrao sy ny teny lakilevatokely.08/31/2020
Amin'ny maha-mpitaingina matihanina anao dia indraindray mandeha bisikileta mandritra ny 20 na 30 ora isan-kerinandro mihitsy aza ianao. Ary toy izany amin'ny farany dia mitondra ireo làlana izay mitondra fiara hatrany ianao. Nandritra ny asako dia tiako ny mahita ireo arabe kely rehetra.
Ary eto New England, toerana misy ahy, dia misy arabe ara-bakiteny an-jatony izay mifarana amin'ny toerana iray ihany. Ka anio dia hasehoko an-dry zalahy torohevitra sy fika nampiasako azy ireo mba hitazomana ny lalana hatrany ary hampitsiky anao. (bass bass) Iray amin'ireo mpiara-miasa aminay eto amin'ny GCN i Komoot.
bisikileta pokemon mandeha
Komoot dia rindrambaiko map. Misy làlana iray izay noraisiko ho porofo nandritra izay fotoana izay tsy dia tiako loatra satria tamin'ny làlambe lehibe io, nojereko ny Sarintany Komootand Open Street mba hahitana lalana hafa izay toa hitarika ahy any. Ka andao ary isika hijery azy ireo. (mozika manentana ny fanahy) Ka alohan'ny hivoahantsika hijery ny zava-drehetra dia te hampiseho aminao ny zava-mitranga eto aho.
Noho izany, ny làlana tiako haleha dia manomboka eto amin'ny toerana onenako, mivezivezy, tonga, ary avy eo io no fihaonan-dàlana izay tsy tiako hanakaiky kokoa. Ny olona mitondra fiara toy ny adala, adala, hafatra an-tsoratra, iza no mahalala izay ataony. Halako io fihaonan-dalana io, tsy te ho akaiky azy aho.
Nandritra ny tao Komoot dia hitako fa nisy ny rafitry ny làlana izay tsy mbola nitaingenako hatrizay ary izany dia hitarika ahy hamakivaky an'io faritra io ary hiditra amin'ny hevitra afovoan-tanàna mifanohitra amin'ny heatmaps manerantany an'i Strava. Ary raha azonao atao ny mamantatra hoe inona izany dia ny hafanana, i. H. ny isan'ny fotoana nahavitan'ny mpampiasa Strava ary nitaingina ny ampahan'ny làlana.
Ary hitako ireo mpamily fa nandalo ny ampahany amin'ilay làlana tiako hampiasaina, saingy misy faritra izay tsy hiasako. Ka io faritra io no horaisiko ary hampidina ahy eo afovoan-tanàna izy io izay ho tonga lafatra . Ka ny farany dia ny hamarinao fa mijerijery amin'ny mpiambina ny lalana ianao fa mamela bisikileta satria ny zavatra farany tianay hatao dia ny mitaingina làlana izay natao ho an'ny mpandeha an-tongotra sy mpiambina vorona ary ny toy izany, ary ny bisikiletinay mandalo ao ary mampientanentana ny rehetra.
Alao antoka fa ampandrosoinao izy io, alao antoka fa jerenao izany, ary aza mitaingina zavatra tsy heverina ho misy bisikileta. Ity no làlana lehibe ezahako hialana. Ireo làlambe rehetra izay miverina amin'ny faritra miverina afovoan-tanàna.
Mampalahelo fa fomba tsara hiverenana io, saingy izao hitako izao lalana vaovao izao dia heveriko fa safidy tsara kokoa ity. (mozika tadin'ny staccato haingana) Eto izahay. Hataoko fotsiny fa milamina ny bisikileta.
Jereo izay ananantsika eto. Tsy milaza izany hoe tsy avela ny bisikileta. Andao àry hanomboka. (misento) (mozika manaitaitra) Eny, io tokoa no làlana tokony haleha.
Izay ny lalana mifanohitra amin'izany. Tsy maintsy mandeha amin'ity lalana ity isika. Mahafatifaty ity lalana ity, ny fanapahana tonga lafatra mba hialana amin'ny fivezivezena ratsy rehetra. (mozika adventurous) Tena faly aho amin'izany.
Nandiso ny fifamoivoizana adala izahay, nahita fomba fijery mahafinaritra momba ny tandavan-tendrombohitra, ny tandavan-tendrombohitra any aoriana, miaraka amina drafitra kely kokoa azonay io ampahan'ny gravel sy lalana io. Mahafatifaty! (mozika manaitaitra) Izany no fanapahana tonga lafatra mba hialako amin'ny làlambe sy mankamin'ny lalan'ny bisikileta eo an-toerana. (mozika malefaka malefaka) Tsara, noho izany ny tendroniko manaraka dia iray tsara izay efa nampiasaiko imbetsaka. ary midika izany fa aza manaikitra mihoatra ny azonao tsakoina.
Ary izany no tiako holazaina, raha mikasa dia lavitra 60, 70-kilaometatra ianao, alao antoka fa hanao ny tapany voalohany ianao raha mieritreritra fa hanao amin'ny andro voalohany. Ka, andao lazaina hoe 30 kilaometatra na zavatra toy izany, mivoaka ianao, azonao antoka fa mijanona eo ilay fitsaharana tsy dia fantatrao izay tena misy, ary ny lalana nofidinao dia tena mandalo, ary avy eo ianao Salama tsara. Satria raha mivoaka amin'ny kilaometatra 45, 40, 50 ianao ary eo afovoan'ny toerana dia manana 50 kilometatra 20, 30 hafa ianao, na inona na inona hodianao, dia sahirana ianao.
Tsia, ataovy ny ampahany voalohany amin'ny dia, 30, 40 kilaometatra. Miverina ny ampitso, miverena ny ampahany hafa. Avy eo mihaona eo afovoany ianao, ary avy eo amin'ny andro fahatelo dia mandalo ianao ary manao ilay loopika iray manontolo.
Fantatrao fa mikoriana tsara ny zava-drehetra, fantatrao hoe aiza no misy ny fitsaharanao, izany rehetra izany. Namonjy ahy tamin'ny andro ratsy maro tamin'ny bisikiletako ary faly aho fa nampihatra an'ity dingana ity imbetsaka. (Mozika miala sasatra) Eny ary, izahay dia naniry ny hitifitra ity tany ivelany tany am-boalohany, saingy nilatsaka ny varatra sy varatra ara-bakiteny, ary avy ny orana ary very saina any izao, ka eto amin'ny cafe misy ahy avy eto izahay izay mitondra antsika amin'ny tendrony manaraka ary izany isaky ny 20 kilaometatra eo ho eo dia tianao ho azo antoka ny fijanonanao fitsaharana mahafinaritra miaraka amin'ny vatsy sy sakafo sy rano satria raha tsy izany dia eo afovoan'ny toerana ireo lalana ireo.
inona no hohanina alohan'ny mandeha bisikileta lava
Manomana zavatra izay toa mampientanentana sy mahafinaritra ianao, saingy tsy misy toerana fihinanana na rano ara-bakiteny. Tsy ho tsara tarehy io. Noho izany dia mila miverina any amin'ny tanàna ianao mankany amin'ny toerana misy fivarotana ao amin'ny firenena na zavatra toa izany mba hahafahanao mahazo mofomamy na biscuit ary rano.
Google Maps dia manao izany tsara ho ahy. Ary isaky ny eo afovoan'ny toerana aho, amin'ny ankapobeny dia manao zoom ao amin'ilay faritra aho, izay 20 kilaometatra eo ho eo, dia manorata ao amin'ilay magazay, ary avy eo mijery hoe aiza no hisy ny magazay any an-toerana. Rehefa hitako io dia ampiako amin'ny làlako.
Ary avy eo amin'ny 40 kilometatra dia manao zavatra mitovy aho, sns sns. Tena tsara izany raha afaka manomana satria raha tsy manao izany ianao dia afaka misambotra azy. Ireto no torohevitra tsara azoko omena amin'ny fandaminana fitsangatsanganana vatokely tsara any Komoot, ny fahafantarana ny toerana hampiasana heatmaps Strava, ny fahafantarana ny Google Maps, ny fahafantarana ireo torohevitra sy tetika kely rehetra handaminana ilay fitsangatsanganana tonga lafatra mba hahazoana antoka fa tsy mankaleo mihitsy ianao rehefa ' re any ivelany satria iza no te ho leo? Ary iza no te ho very tsy ho aiza? Tsy tianao, tsy te handady eo ivelan'ny varavaran'ny olona ianao ary miteny hoe: 'Salama, afaka mahazo rano azafady?' Tsy tianao izany.
Ka alao antoka fa mampihatra an'io zavatra io ianao ary miaraka miala voly amin'izany. Raha tianao ity lahatsoratra ity, azafady mba omeo thumbs up. Tsindrio eto raha hijery lahatsoratra sy toro-hevitra momba ny vatokely mahafinaritra kokoa, ary raha tianao ny GCN ary te-hisoratra anarana dia tsindrio eo afovoany.
Ahoana no ahitanao ny lalana feno loto ao amin'ny Google Maps?
Mipetraha fotsiny amin'ny adiresy na faritra tianao haleha ary aGoogle Mapsmiseho miaraka amin'nylalana vatokelynasongadina mavo.08/31/2020
Aiza ny lalan'ny vatokely misy ahy?
Fomba hafamahita lalana vatokely
Anontanio nyan-toeranafivarotana bisikileta. Matetika izy ireomahalalany toerana tsara indrindra.JEREO NYraha misyvatokelyhetsika momba ny fanaingoana akaikinao ao amin'ny BikeReg.com. Maro amin'ireo hetsika ireo no mamoaka nyLALAN'NY MPANAFIKAtoy ny fisie GPX na eo fotsinynysarintany, raha tsy te hisoratra anarana amin'ilay hetsika voasoratra anarana ianao.
Manimba fiara ve ny arabe gravel?
Maranitra izy io ary mifangaroharo arynoBebe kokoafahavoazanaamin'ny kodiarana mahazatra noho ny ankamaroan'ny faritra mitondra fiara rehetrano. Raha tsy maintsy mandeha ianaolalana vatokely, mitondra fiara miadana sy mitandrina mba hikarakarana tsara ny kodiaranao.15.01.2019
Afaka misoroka lalan-tany ve ny Google Maps?
Amin'izao fotoana izao, tsy misy fomba azo antoka-balasorohy ny lalana malotorehefa mampiasaGoogle'sFampiharana GPS sy fitetezana.Google Maps dia manaotsy manana safidy namboarina hosorohy ny lalana maloto, mitovy amin'ny anaoafaka misorokaPeazyLALANA, ohatra. Telo fotsiny ny masonkarena anaoafakaampiasao rehefa manivana zotra: làlambe, tolotra ary ferry.09.11.2020
Fanjakan'ny iza no manana lalana be fasika indrindra?
Araka ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2013 nataon'ny Federal Highway Administration, Iowa dia tonga amin'ny toerana faha-6 raha nytena tsy vita rarivatomileage isaky nyFANJAKANA. Texas, Kansas, Minnesota, Illinois ary North Dakota ihany no manana betsakalalankilaometatra avy amin'nylalana.11.30.2014
Iza no Waze sa Google Maps tsara kokoa?
rahaGoogle Mapsmanana ny endrik'ilay rindrambaiko nentim-paharazana kokoa miaraka amin'ireo fampahalalana an-tsary rehetra manome,Wiktionarymaka fomba tsotra kokoa miaraka amin'ny antsipiriany vitsy sy famolavolana sary an-tsary. Izany fahasamihafana izany dia avy amin'ny zava-misy fa ireo fampiharana roa ireo dia natao ho an'ny zavatra samy hafa tanteraka.20 2021.
Moa ve mandreraka kodiarana ny arabe gravel?
Ny volavolan'nykodiarana, ny lanja sy ny lanjan'ny fiara, ny fomban'ny mpamily ary ny kalitao sy ny toetran'nylalanadia anton-javatra rehetra.Làlana vatokelytemitafy kodiaranahaingana kokoa noho ny malamaLALANA.
làlana bisikileta york vaovao
Firenena iza no manana ny lalana malama indrindra?
Idaho, North Dakota ary Wyoming no manana nylalana tsara indrindrasy tetezana. Maherin'ny 20% an'ny EtazoniaLALANAary 6.1% ny tetezana dia ao anaty toe-javatra mahantra na tsy ekena.
Mampiasa data angaha be ny WAZE?
Google MapsAmpiasaomanodidina ny 0.6MB an'nytahirin-kevitraisan'ora aryMampiasa Waze0.23MB eo ho eo monja ary izanydiamandehana midina ambany noho izany raha mandrafitra ny làlan-kaleha na ny sarintany ianao mandritra ny Wifi. Mobiletahirin-kevitramila alefa ho an'ny GPS sy ny serivisy toerana hafa mihodina ao aoriana fa izy ireo koa,AmpiasaoKely kokoatahirin-kevitra.6 2021.
Aiza no ahitako sarintany misy lalan-tany graba?
Tongasoa eto Gravelmap! Gravelmap dia fitaovana iray hikarohana sy hizarana arina vatokely sy loto ao amin'ny faritra misy anao, natolotr'ireo olona akaiky anao. Noheverinay fa ny toerana misy anao dia. Browse the Map!
Aiza no hahitana ireo mpikirakira lalan-kely tsara indrindra?
Ny orinasa eo an-toerana aza dia afaka manadihady ny faritra eo anelanelan'ny tranonao sy ny làlambe hitadiavana ny làlana izay mampihena ny fotaka sy ny rano maloto. Làlan-kizorana mafy izay mahazaka fiara mavesatra sy toetrandro no tena ilaina. Mitadiava mpandraharaha eo an-toerana ny fomba ahafahana manangana izay ilainao amin'ny fitaovana kely sy ny vidin'ny fitaterana.
Ahoana ny fomba hahitana lalana amin'ny vatokely any Redmond WA?
Gravelmap dia fitaovana iray hikarohana sy hizarana arina vatokely sy loto ao amin'ny faritra misy anao, natolotr'ireo olona akaiky anao. Noheverinay fa Redmond, WA, ny toerana misy anao. Mora ny manampy ny lalan'ny gravelt. Tsindrio ny sari-tany raha hanisy teboka amin'ilay zotra. Tsindrio ny teboka iray hamafana azy, na kitiho ary hisintona mba hamindra izany.